Otú Ị Ga-esi Enyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Na-emekwu nke Ọma n’Ule | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Abkhaz Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Belize Kriol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Otú Ị Ga-esi Enyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Na-emekwu nke Ọma n’Ule
O yiri ka ịga akwụkwọ anaghị atọzi nwa gị ụtọ. Ọ naghị ekwe amụ ihe ma ọ bụ mee ihe omume e nyere ya n’ụlọ akwụkwọ. Gịnị ka ọ ga-akpatara ya? Ọ ga-ada n’ule, àgwà ya a na-akakwu njọ. Olee otú ị ga-esi enyere nwa gị aka ịna-eme nke ọma n’ule?
Ịmanye nwa gị ka o mee nke ọma n’ule na-eme ka nsogbu ya ka njọ. Ịna-amanye nwa gị ka o mee nke ọma n’ule ga-eme ka obi koro ya n’elu ma n’ụlọ akwụkwọ ma n’ụlọ. Iji gbaara nsogbu ị na-enye ya ọsọ, o nwere ike ịghara gị ụgha banyere onye ole ọ gbara ma ọ bụ zochie akwụkwọ ule ya ma ọ bụrụ na o meghị nke ọma. N’obodo ụfọdụ ebe ndị nne na nna ga-abịanye aka na rịpọt kaadị nwa ha iji gosi na ha ahụla ya, o nwedịrị ike iji aka ya bịanyere gị aka ka à ga-asị na ọ bụ gịnwa bịanyere ya. O nwekwara ike jụ ịga akwụkwọ mgbe ụfọdụ. Nke ahụ ga-eme ka ihe kakwuo njọ.
Inye nwa gị ihe mgbe ọ bụla o mere nke ọma n’ule nwekwara ike ịkpata nsogbu. Otu nna aha ya bụ Andrew kwuru, sị: “Anyị na-enye nwa anyị nwaanyị ihe mgbe ọ bụla o mere nke ọma n’ule iji mee ka ọ na-emekwu nke ọma. Ma nke ahụ meziri ka uche ya dịrịzie naanị n’ihe ndị ahụ anyị na-enye ya. Mgbe ọ bụla ọ na-emeghị nke ọma n’ule, kama obi ga na-ajọ ya njọ na o meghị nke ọma, ọ na-ewute ya na o nweghị ihe anyị ga-enye ya.”
Ịta ndị nkụzi nwa gị ụta agaghị eme ka ihe ka mma. Nwa gị nwere ike chewe na o nweghi uru mmadụ ịna-agba mbọ ka ọ na-emekwu nke ọma bara. O nwedịrị ike mụta ịna-ata ndị ọzọ ụta maka ihe ndị ọ na-emetaghị. O nwekwara ike tụwa anya ka ndị ọzọ na-emere ya ihe nille. Nwa gị nwere ike ghara ịmụta otu ihe dị mkpa ga-abara ya uru ná ndụ mgbe o toro, ya bụ, ikweta ihe o mejọrọ.
Na-ejide onwe gị. Gị na nwa gị akparịtala gbasara onye ole ọ gbara mgbe iwe ji gị. Otu nna aha ya bụ Brett kwuru, si: “Ọ bụrụ na mụ na nwunye m na nwa anyị ekwuo gbasara onye ole ọ gbara mgbe obi dị anyị mma nakwa mgbe ahụ́ ruru anyị ala, ọ na-akacha abara ya uru.”
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: ‘Bụrụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịghị ewe iwe ngwa ngwa.’​—Jems 1:19.
Chọpụta ihe bụ́ nsogbu ya. Ihe kacha eme ka ụmụaka ghara ịna-eme nke ọma n’ule bụ nsogbu ụmụ akwụkwọ ibe ha na-enye ha, ịna-agbanwe ụlọ akwụkwọ, ụjọ ule, nsogbu ezinụlọ, ehighi ụra ọfụma, ahazighi ihe ha na-eme ahazi, na etinyeghị uche n’ihe a na-amụ n’ụlọ akwụkwọ. Echela na ihe kpatara ya bụ na nwa gị anaghị agba mbọ.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Onye na-egosi na ya nwere nghọta n’okwu ga-enweta ihe ọma”​—Ilu 16:20.
Mee ka nwa gị nwee ebe dị mma ọ ga-anọ na-amụ ihe. Haziere nwa gị oge ndị ọ ga na-eji eme ihe omume ụlọ akwụkwọ ya na nke ọ ga na-eji amụ ihe. Chọtara ya ebe ọ ga-anọ mụọ ihe n’enweghị ihe ndị dị ka, tiivi ma ọ bụ ekwe ntị, ga na-adọpụ ya uche. Kebie oge ị ga-eji enyere nwa gị aka ime ihe omume ụlọ akwụkwọ ya obere obere, ka o mee ka uche ya dịrị n’ihe ị na-akụziri ya. Otu nna bụ́ onye Jamanị aha ya bụ Hector kwuru, sị: “Tupu oge ule nwa anyị eruo, anyị na-ebido n’oge lebawa anya n’ihe ndị a kụziiri ya n’ụlọ akwụkwọ obere obere, kama ichewe mgbe oge ule ha ruru.”
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “E nwere oge a kara aka maka ihe ọ bụla.”​—Ekliziastis 3:1.
Mee ka nwa gị mata uru ịmụ ihe n’onwe ya bara. Ọ bụrụ na nwa gị aghọta uru ịga ụlọ akwụkwọ ga-abara ya ugbu a, ọ ga-eme ka ọ na-agụ ya agụụ ịmụ ihe. Dị ka ihe atụ, ya mụta otú e si arụ mgbakọ na mwepụ, ọ ga-enyere aka ịma otú ọ ga-esi ahazi otú ọ ga-esi emefu ego mmachi akpa ya.
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Nweta amamihe, nweta nghọta. . . . Were ya kpọrọ oké ihe.”​—Ilu 4:​5, 8.
Aro: Kụziere nwa gị otú ọ ga-esi eme ihe omume e nyere ya n’ụlọ akwụkwọ, mana emekwarala ya ihe omume ya. Andrew anyị kwuburu okwu ya ná mmalite kwuru, sị: “Nwa anyị bịara tụwa anya ka anyị na-emere ya ihe omume ya niile, o nweghịzi nke ike na-ekwe ya mee.” Kụziere nwa gị otú ọ ga-esi na-eme ihe omume e nyere ya n’ụlọ akwụkwọ n’onwe ya.
“Ọ bụrụ na nwa m emeghị nke ọma n’ule, m na-agbalị ijide onwe m. M na-ajụ ya ihe kpatara ya nakwa ihe ọ ga-eme ka o nwee ike imekwu nke ọma n’oge ọzọ. M na-agbalịkwa icheta na ọ bụghị mgbe niile ka m mere nke ọma n’ule mgbe m dị obere”​—Millicent.
“Anyị na-ebido mgbe ụlọ akwụkwọ mepere lebawa anya n’ihe ndị ụmụ anyị na-amụ n’ụlọ akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ ndị nne na nna na-eji achọpụta na nwa ha chọrọ enyemaka bụ mgbe o buru klas n’isi. Mgbe ahụ ọ ga-ewe ha oge buru ibu iji nyere ya aka ịna-eme nke ọma.”​—Edwin
Ịzụ Ndị Na-eto Eto Ịzụ Ụmụ Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ
Ịzụlite Ụmụaka Ịrụ Ọrụ Dịịrị Ha